Xog Muhiim ah oo ku Saabsan Xaasaska Hoggaamiyayaal Kaligood Taliyayaal ah,+ Sawiro Layaab Leh. |
Xog Muhiim ah oo ku Saabsan Xaasaska Hoggaamiyayaal Kaligood Taliyayaal ah,+ Sawiro Layaab Leh.
Hargeisa(GNN):-Nin kasta oo magac leh waxa ka dambaysa gabadh sida maahmaahyaha caan baxay tilmamaan, balse su’aashu waxa ay tahay bal ka waran haweenka kaligood taliyayaasha caalamka?
Wanaag iyo wanaag la’aan haweenka ay qabaan hoggaamiyayaasha kaligood taliyayaasha ah waxa ay ka mid yihiin musuqa, siyaasad xumada iyo dhibaatooyinka xukunka saygoodu ku kaco.
Haween ay ka mid tahay marwada koowaad ee Rwanda, Jeannette Kagame, waxa ay awoodda ay haysato u isticmaasha in ay ugu ololayso caawimooyinka dadka tabaalaysa, halka xaaska Madaxweynaha Suuriya, Asma Al Assad ay aad u jeceshahay waxyaabaha raaxada iyo dhaldhalaalka ah sida in ay sawirro iska soo qaado kuna baahiso baraha bulshadu ku kulanto sida Instagram-ka.
Kaligood taliyayaasha marka la eegaayo waa waddamada xad-gudubka xuquuqal-insaanku ka jiro, caddaadiska xorriyatul-qawlka, gaar ahaan saxaafadda iyo mucaaridka oo aan awood lahayn baqasho aawadeed.
Marwada Madaxweynaha Angola Ana Paula dos Santos
Marwada koowaad ee Angola, Ana Paula dos Santos oo ahayd gabadh dharka xayeysiin jirtay (former Fashion model), waxa ay saygeeda isku barteen diyaarad Angola laga leeyahay (Air Force one). Waxa ay haysata laba digree oo kala ah mid dhigista ah iyo mid sharcig aah. Waxa ay ka mid tahay guddi xaqiiqo raadis ah oo heer caalami ah (International Steering Committee).
Dadka dibloomsiyiinta ah waxa ay ku sharraxaan gabadhan “Marwada koowaad iyo saygeedu waa lammaane qurxoon, dhar qaad qurux badan, dharkooduna aad u qaali yahay. Waxa ay dhaleecayn badan uga yimaadeen shacabka, kadib markii ay ku dhawaaqday in wiilkeedu dhigan dono ddugsi Borugal (Portugal) ku yaala, gaar ahaan magaalada Luanda, sababtoo ah tayo darrada aqoonta qaranka Angola, iyadoo waliba dadku u aaneeyaan in saygeedu masuul ka yahay tayo darrada aqoonta dalka.
Madaxweyne Jose Eduardo Dos Santos oo 36 sannadood xilka dalka Angola haystay waxa uu awoodda oo dhan geliyey gacantiisa. Waxa lagu eedeeya maamulkiisa in ay ku kacaan tacadiyo baahsan, jidh dil iyo dil wadareedyo, gaar ahaan 27 sannadood oo uu dalku dagaal sokeeye ku jiray, ilaa hadda xad-gudubyada hay’adaha xuquuqal-insaanku way soo gudbiyaan
Xaaska Boqorka Baxrayn Sabika Bint Ibrahim Al Khalifa
Boqorka Baxrayn xaaskiisa Sabika Bin Ibrahim Al Khalifa waa xaaska ugu horraysay ee boqor Xamad Bin Isa Al Khalifa. Marka laga yimaado in afar carruur ah oo ay aad u jeceshahay leedahay oo mid ka mid ah uu u cumaamadan yahay inuu noqdo amiirka mustaqbalka.
Marwadan waxa ay caan ku tahay in ay u ololayso, una doodo xuququda haweenka iyo carruurta ee ku sugan dalkeeda iyo caalamkaba. Marar badan waxa ay arrimaha kaga hor khudbadaysay Golaha Sare ee Qaramada Midoobay (UN General Assembly).
Waa Madaxa Golaha Sare ee haweenka Baxrayn, iyadoo ku dhiirigelisay qaranka in ay haweenku helaan xaqooda codaynta. Sidoo kale waa Madaxa Ururka Taageerida Haweenka iyo Carruurta Baxrayn. Waa gabadh dedaalkeeda ugu badan gelisa in ay horumariso haweenka iyo ubadka.
Dalka Baxrayn waxa ay qoyska amma boqortooyada Al Khalifa maamulaysay laga soo bilaabo 1783kii. Saygeeda Xamad waxa uu boqor noqday 2002kii, isagoo hore u ahaa amiir maamula ciidammada.
Haddaba, markii 2011 kacdoon isaga ka dhan ah ay ku kaceen shacabku waxa ay hay’adaha xauquuqal-insaanka ee Amnesty International ku hdaleecaysay in ay shacabka ka mabnuucday in ay xorriyadooda muujiyaan, qaar badan oo ka mid ahna tacadiyo kula kacday xadhig iyo jidh-dil u badan.
Marwada Koowaad ee Kamaruun (Cameron) Chantal Biya
Xaaska Madaxweyne Paul Biya ee magaceeda la ydihaa Chantal Biya waa gabadh bulshaawiyad ah. Waxa ay xataa la kulantay xaaska Madaxweynaha Maraykanka Michelle Obama iyo baadariga Masixiyiinta ugu sarreeya ee Pope Francis.
Waxa gabadhan laga hayaa in ay aad u jeceshahay nashqadaynta dharka ee Dior iyo Chanel, in badan oo ka mid ahna ay iibsatay oo guriga ay u yalaan.
Waxa ay ka mid tahay xubn Afrika ah oo u dooda amma xal u raadiya xakamaynta cudurka HIV/AIDS, gaar ahaan dalalka Kamaruun, Ifarikoost (Cote’ D’Ivoire) iyo Burkiinafaso (Burkina Faso).
Saygeeda amma Madaxweyne Paul Biya waxa uu xukumaayey dalka 30 sanadood, balse sannadkii 2008 waxa uu xadiday awoodihiisa, sababtoo ah waxa uu go’aansaday inuu xafiiska si aan toos ahayn u maamulo. Ciidammadiisa ammaanka waxa lagu eedeeya inay dilaan qof kasta oo isku daya inuu mudaharaad dhigo. Mucaaridka waxa ay u adeegsadaan xirfado lagu khaarajinaayo amma xad-gudubyo loogu geysanaayo. Dahwaan warbixin laga soo saaray dalka waxa lagu sheegay in madaxweynahu qaato mushahar 229 ka badan celcelis ahaan kharashka dalka soo gala.
Xaaska Madaxweynaha Jad (Chad) Marwo Hinda Deby
Marwada Madaxweyne Idris Deby Itno oo ka taliya dalka Jad (Chad), taasoo loo yaqaan marwada cusub amma marwada afraad amma 13aad qof kasta oo aad waydiisaba si gaar ah uga jawaabo kaalinta ay ku jirto, maadaama saygeedu marar badan guursaday. Waa gabadh saygeedu aad u jecel yahay, qurux badan, waana ta ugu caansan marwooyinka uu Madaxweyne Idiris Deby qabo.
Waa gabadh aqoon badan leh, dhar qaad qurux badan. “Waxa ay iga caawisa talo kasta iyo go’aan kasta oo aan gadhaayo,” ayaa laga hayaa Madaxweyne Deby Itno.
Madaxweyne Idiris Deby waxa uu xukunka ku qabsaday afgambi millateri oo uu Madaxweynihii ka horreeyey kaga tuuray xilka 1990kii. Waxa uu galay doorashooyin badan oo aan cidiba kula loollamin. Waxa uu masuul ka ahaa dagaallo dhiig badan ku daatay oo dhex maray Jaad iyo Suudaan sannadkii 2000aadkii.
Marwada Koowaad ee Dalka Equatorial Guinea
Marwada Madaxweynaha Equatorial Guinea Contancia Mangue, waxa ay abaalmarino badan ku heshay u dooditaanka xuquuqda haweenka iyo caruurta, iyadoo masuul ka ah ururro maxali ah oo ay aasaastay sida Equatorial Guinean Child Aid Committee.
Waxa ay dhashay gabadhan inanta ugu weyn ee Madaxweynaha oo la yidhaa Teodoro Nguema Obiang Mangue oo ah dhaxal sugaha aabbaheed.
Madaxweyne Mbasogo waxa uu awoodda dalkiisa ku qabsatay afgambi, maadaama uu hore u ahaa Madaxa Ciidammada Ilaalada Qaranka, waxaannu afgambi dhiig ku daatay kala wareegay kaligii taliye ka horreeyey. Waxa lagu eedeeyaa inuu cunay dad badan oo ka soo horjeeda si uu awood u yeesho, kadib markii uu muddo ka badan 35 sannadood xukunka haystay waxa uu noqday hoggaamiyaha ugu muddada dheer ee Afrika xukun haysta, inkastoo hadalo qarsoon sheegaan in xilka uu ka degi doono maadama uu qabo kansar xun.
Wararkan waxa lagu beeniyaa mareegta rasmiga ah ee qarankiisa, iyadoo ku sheegtay inay tahay hadal kutiri kuteen ah.
Marwada Madaxweynaha Gambiya Saynab Suma
Marwada Madaxweynaha Gambiya Saynab Suma, inta badana dadkeedu aad bay u neceb yihiin waxaanay u yaqanaan naanayso ay ka mid yihiin “Dahab gurato”, tii xumayd, shaydaamad, iyagoo ku eedeeya in ay ku wiirsato dadka saboolka an ee Gambiya.
Saygeeda waxa uu gabadh labaad oo da’ yar guursatay 2010, taasoo keentay in Suma hinaasto, una guurto dalka Maraykanka, uguna hanjabtay inuu furo, haddii kale uu xaaska cusub furo. Waxa ay u leedahay Madaxweynaha laba carruur ah.
Madaxweyne Yahya Jammeh waxa uu dalka Gambiya gaadhsiiyey xasiloono, balse waxa uu cadaadiya warbaahinta iyo xorriyatul qawlka. Wakaalada Wararka ee Reuters waxa ay baahisay warar sheegaya inuu aad u jecel yahay awoodda iyo inuu dadka ka sarreeyo, taasina waxa ay keentay inuu xabsigau taxaabo dad badan oo ka ag dhawaa oo uu uga shakiyey in ay qorshayanayaan afgambi ka dhan ah. bishii January ee sannadkan oo la isku dayey in la afgambiyo waxa uu keeni gaadhay in xilka laga tuuro. Waxa uu dhaleecayn badan kala kulmay, kadib markii uu ku dhawaaqay inuu xannuunka HIV/AIDS ku daawayn karo daawo dhaqameed, inkastoo wararka qaar sheegaan inuu cudurrada qaar daaweeyo isaga laf ahaantiisu.
Sara Nazarbayeva Xaaska Madaxweynaha Kazakh
Xaaska Madaxweynaha dalka Kazakh Sara Nazarayeva waa gabadh aad u taqaan dhaqaalaha, waana aasaasaha iyo guddoomiyaha hay’aha Boker oo ah hay’ad caalami ah oo carruurta deeqaha lacageed ku caawisa, waanay ku guulaysatay abaalmarino badan sida abaalmarinta Ihsan Dogramaci Family Health Foundation Prize oo ay hay’adda caafimaadka Adduunka ee WHO siisay sannadkii 1997.
Marka laga yimaado ka shaqaynta daryeelka carruurta, waxa ay sheegtay in ay aad uga soo horjeedo in ubadka Kazakh ay tagaan dibada oo dad kale xannaanaystaan, waxaana laga hayaa; “Waa in aan ubadkeena daryeelna oo aynaan u dirin qurbaha.”
Madaxweyne Nursultan Nazarbayey waxa uu xilka haystay 21 sannadood, waxaana lagu eedeeyaa inuu ku kaco maamulkiisu xad-gudubyo baahsan oo xuquuqal-insaanka ah sida inuu mabnuuco ka hadalka siyaasada iyo xorriyatul-qawlka, musuqmaasuq iyo xad-gudubyo haweenka ka dhan ah.
Halkan Ka Daawo- Khudbad Sannadeedkii Madaxweynaha Somaliland Maanta ka horjeediyey…
Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland Oo Bilaabay Wajiga Labaad ee Qaybinta…
Halkan Ka Daawo Golaha Wakiilada oo Guddi u Saarey Xeerka…
'Halkan Ka Daawo Warbaahinta Somalia oo Si Wayn Usoo Qaadatay…
Madaxweynaha Somaliland Oo Soo Bandhigay Tirada Xafiiska Hantidhawrka Qaranku u…
Xisbiga Ucid Muxuu Ka Yidhi Khudbad Sanadeedkii Madaxwayne Biixi Maanta…
Halkan Ka Daawo:XILdhibaano Aragtidoodaka Dhiibtay Qudbadii Madaxweynha JSL ka ....
Madaxwaynaha DDS Itoobiya oo Koobkii Gudoonsiiyey Xulka Ku Guulaystay Koobka…
Halkan Ka Daawo: 517 Arday Oo U Fadhiisstay Imtaxaan Shaqo…